Ukulethwa kwezimbali zezimbali eMoscow
1. Yini inqubo yoku-oda?
2. Ngingasilandelela kanjani isimo se-oda lami?
3. Iziphi izindlela engingazikhokhela i-oda?
4. Yini i-Floristum.ru?
5. Kungani ngikwazi ukukhokha ngekhadi?
6. Ungaqinisekisa ukuthi ukukhokha ikhadi kuphephile?
7. Ngingakhokha ngokheshi?
8. Isebenza kanjani imali ebuyiswayo?
9. Ngabe zikhona iziqinisekiso zokuthi inani elikhokhelwe lizofika kuwe?
10. Iziphi izindlela ezingasetshenziswa ukukhokhela i-oda?
11. Ngabe ukulethwa okusheshayo kuyenzeka?
12. Ziyini izindleko zokulethwa?
13. Ngabe ukulethwa kungenziwa ngesikhathi esifanele?
14. Ngingafaka i-oda uma ngingalazi ikheli lomamukeli?
15. Ngizokwaziswa kanjani ngokulethwa?
16. Ngingafaka i-oda lokulethwa kwelinye izwe?
17. Uzohanjiswa nini umyalo?
Imibuzo mayelana ne-oda
18. Ungayifaka kanjani i-oda?
19. Yini okufanele uyenze uma ungasithandi isixha?
20. Angikwazi ukuxhumana nabatshali bezimbali ngocingo. Okufanele ngikwenze?
21. Uma isikhathi sokulethwa sidinga ukuvunyelwana nomamukeli, bazoshaya nini?
22. Ngabe ngidinga ukufaka i-oda ngaphambi kwesikhathi?
23. Lenziwa kanjani uhlelo lokubambisana?
24. Isivumelwano sezinhlangano ezisemthethweni
25. Kwenziwa kanjani ukubhalisa?
26. Yiliphi inani elincanyana kakhulu lemibala elikhona uku-oda?
Imibuzo mayelana nezimbali
27. Kungenzeka yini ukushintsha izingxenye zezimbali noma uhlelo lwazo lombala?
28. Ungakutholaphi ukwakheka kwezimbali?
29. Ngingabuthola kanjani ubukhulu bezimbali?
30. Yini engingayithola esigabeni se-Super Offer?
31. Kuthiwani uma udinga isixha esinezimbali ezithile?
32. Ingabe isixha siyofana nalesi esithombeni esivela kusayithi?
33. Ingabe isixha singenziwa sibe sikhulu?
34. Kungenzeka yini ukuthenga izimbali ezimbizeni noma kuzithombo?
35. Ngingazibeka kuphi izifiso zami ze-oda?
36. Ngabe izimbali ziyobe zisha?
Isiqinisekiso sekhwalithi yesevisi i-Floristum.ru
37. Ngabe ukukhokha ngokusebenzisa iwebhusayithi kuphephile?
38. Ngingakwazi yini ukukhathazeka ngokuphepha kwemali yami?
39. Ngingayithola kanjani imali ekhokhelwe?
40. Ngingasibhalela kuphi isikhalazo sami?
41. Ngingabhala kanjani ukubuyekeza?
42. Ngabe konke ukubuyekeza kungokoqobo?
43. Ngingathumela isixha esineposikhadi?
44. Ngingakwazi uku-oda enye into ngaphandle kwezimbali?
45. Yiliphi ikhadi elizothunyelwa nezimbali?
46. ​​Ngingasibona isithombe somamukeli nesixha esihanjisiwe?
47. Ngabe unohlelo lokusebenza lwe-smartphone?
48. Kungani kukhethwa izimbali ezahlukene emadolobheni?
49. Kungani amanani ezifundeni ephakeme kunaseMoscow?
Okokuqala, ucacisa idolobha lokulethwa, khetha isixha osithandayo ngokuchofoza inkinobho kuso bese uya ekhasini lokuphuma. Lapha ucacisa idatha yomamukeli, isikhathi sokulethwa nedatha yomthumeli wesimbali. Ngemuva kokukhokha ngempumelelo, i-oda liya kubathengisi bezimbali. Uzokwaziswa ngokulethwa ngomyalezo othunyelwe kwinombolo yakho yocingo ne-imeyili, futhi imininingwane iyatholakala ku-akhawunti yakho yomuntu siqu ku.floristum.ru/en.
Sithumela imininingwane yakamuva mayelana nesimo se-oda lakho ngemiyalezo ye-SMS, ama-imeyili, futhi ungahlola isimo se-oda ku-akhawunti yakho yomuntu siqu kuwebhusayithi yethu. Uzothola i-SMS kanye nomyalezo we-imeyili mayelana nokuthola inkokhelo ye-oda kanye noxhumana nabo besazi sezimbali abalandela isixha sakho, ungaxhumana nomhloli wezimbali nganoma yisiphi isikhathi, ucacise isimo noma wenze izinguquko kumingcele yoku-oda izimbali.
Ungakhokha ngqo kuwebhusayithi usebenzisa ikhadi lasebhange lomuntu ngamunye. Ezinhlanganweni zomthetho, ukukhokha ngokudluliswa kwebhange kuyatholakala.
I-Floristum.ru iyinsizakalo elula lapho izitolo zezimbali nezimbali ezithile ezivela emhlabeni wonke zibeka imikhiqizo yazo ezithengiswayo. Lapha ungakhetha futhi u-ode isixha esivela kudokotela wezimbali ovela edolobheni lakho, esizokwanelisa ngokugcwele izifiso zakho. Ngaphezu kwalokho, amakhasimende wangempela athumela ukubuyekezwa kusayithi, okulula kakhulu lapho ukhetha indawo yokubeka i-oda lokulethwa kwembali. IFloristum.ru ikuqinisekisa ukwenziwa kwe-oda, ezimweni ezingalindelekile insizakalo izobuyisa imali yakho, lokhu kungenzeka ngenxa yokuthi abashayeli bezimbali nezitolo bathola imali yokulethwa kwezimbali ezinsukwini ezintathu kuphela ngemuva kokuqedwa kwe-oda, ngalesi sikhathi iklayenti lingafaka isikhalazo futhi lithole imali emuva.
Qiniseka ukuthi imininingwane yekhadi lakho lasebhange lifakwe kahle, igama nesibongo kubhalwe ngesiNgisi njengasekhadini. Ikhodi ye-CVV ngamadijithi ama-3 atholakala ngemuva kwekhadi. Ezimweni eziningi, uhlelo luzokuchazela ukuthi kungani inkokhelo ingaqedelwanga ngempumelelo. Uma inkokhelo yenqatshwa yibhange lakho, qiniseka ukuthi uxhumane nensizakalo yosizo usebenzisa inombolo yamahhala ekhadini lakho. Zama ukukhetha indlela yokukhokha ehlukile ye-oda lakho.
Yebo, siqinisekisa ukuphepha kwamakhasimende ethu. Ukukhokha kwenziwa ekhasini elihlukile eliphephile, futhi idatha yekhadi ngemuva kokukhokha ayigcinwa ohlelweni. Siyasebenzisana noNadezhda kanye nohlelo lokukhokha lwe-CloudPayments oludumile.
Namuhla akunakwenzeka. Esikhathini esizayo esiseduze, ukukhokhelwa kokulethwa kwezimbali ngokheshi kuzotholakala kumakhasimende ethu, bese kuthi ngemuva kokugcwalisa imininingwane edingekayo ku-oda, uzonikezwa izindlela ezimbalwa zokukhokha ozikhethele zona.
Uma kukhanselwa i-oda, inani elikhokhelwe lizobuyiselwa ngokugcwele kwi-akhawunti yakho yasebhange zingakapheli izinsuku eziyi-7 zebhizinisi.
Ukukhokhelwa kwe-oda ngekhadi lasebhange kuyashesha. Sisebenza nohlelo lwe-CloudPayments, okuyindlela yokukhokha efakazelwe. Ngemuva kokwenza inkokhelo, uzothola umyalezo wokuthi umsebenzi uphumelele. Ungakuqinisekisa lokhu naku-akhawunti yakho yangasese.
Ungakhokhela i-oda lakho ngqo kuwebhusayithi ngokusebenzisa ikhadi lasebhange noma lapho uthola irisidi. Izinhlangano zomthetho zingasebenzisa insizakalo yokukhokha ngaphandle kwemali.
Eduze kwesimbali ngasinye yisikhathi esizosetshenziswa ekwakhiweni nasekulethweni kwezimbali. Isayithi linesihlungi esikahle "Ukulethwa okusheshayo", ukusisebenzisa, uzobona izinketho zezimbali ezingalethwa ngesikhathi esifushane.
Ukulethwa kwedolobha kumahhala, enhlokodolobha naseSt. Petersburg - ngaphakathi komgwaqo oyindandatho. Uma ikheli lokulethwa lingaphandle kwedolobha, izindleko zalo zibalwa ngokuzenzakalela. Uhlelo, olususelwa ebangeni ngamakhilomitha, luzokunikeza intengo yokulethwa. Imvamisa kulinganiselwa kuma-ruble angama-45 nge-1 km.
Uma ungeke ukwazi ukukhombisa ikheli ngqo lokulethwa, kepha umamukeli uzobe engaphandle kwedolobha ngokushesha lapho ethumela isixha, khona-ke isisebenzi nakanjani sizokushayela ucingo ukuxazulula le nkinga.
Kuwebhusayithi, ungacacisa isikhathi sokulethwa ngehora. Ngeshwa, insizakalo yethu ayilethi ngesikhathi esiqondile. Kepha sizama ukuthola indlela yomuntu ngamunye kwiklayenti ngalinye, ukuze ukwazi ukukhombisa izifiso zakho ze-oda, futhi abasebenzi bethu bazozama ukwenza konke okusemandleni abo ukukusebenzisa.
Vele, vele usishiyele inombolo yocingo yomamukeli. Iposi lizomshayela futhi licacise isikhathi nendawo yokulethwa kwe-oda lakho.
Ngemuva kokufaka i-oda, uzothola umlayezo onesixhumanisi esiyingqayizivele sokuhlola isimo se-oda lakho. Ngokuchofoza kuso, ungaxhumana nabasebenza ngezimbali, bheka izithombe zezimbali eziqediwe bese ulandelela indawo ye-oda lakho emephini. Ekupheleni kokulethwa, ungabhalela isazi sezimbali obusebenzisana naso. Siyajabula lapho amakhasimende enikeza impendulo, ngakho-ke ungasithumela umlayezo wempendulo ngemibono yakho ejwayelekile yoku-oda ukulethwa kwezimbali.
Yebo, ngosizo lwensizakalo yethu ungahambisa izimbali hhayi ezweni lonke kuphela, kodwa nasemhlabeni jikelele. Vele uthayiphe idolobha onentshisekelo kulo lapho useshwa futhi uzoboniswa zonke izinketho ezitholakalayo zezimbali.
Eduze kwesimbali ngasinye kunesikhathi, esidingekayo ekubhaliseni nasekulethweni kwezimbali kusixhumi. Lapho ufaka i-oda, qiniseka ukuthi ugxila kulo. Uma udinga ukuletha izimbali ngokuphuthumayo, bese usebenzisa isihlungi se-Fast Delivery. Uma udinga ukulethwa ngosuku oluthile, bese ukhetha lapho ufaka i-oda. Uma ubeka umkhaza eduze kwegama elithi "Khumbuza" ku-akhawunti yakho yangasese, insizakalo yeFloristum.ru izokukhumbuza i-oda lakho. Incwadi izokuza ezinsukwini ezintathu ngaphambi kosuku lokulethwa oluhleliwe.
Vele ukhombise indawo yokulethwa, khetha isixha osithandayo bese ubeka i-oda lakho. Ku-oda, khombisa imininingwane yokuxhumana yomthumeli nomamukeli, kanye nesikhathi sokulethwa. Ngemuva kokukhokha ngempumelelo kwe-oda, abashayeli bethu bezimbali bazokuyisa emsebenzini. Uzokwaziswa ngokulethwa ngomyalezo.
Uma ungazithandi izimbali ozitholile nganoma yisiphi isizathu, iya ku-akhawunti yakho noma ulandele isixhumanisi othunyelwe kuwe kumyalezo noma ngeposi. Lapho ungashiya impendulo mayelana ne-oda lakho. Uma ukubuyekezwa kukubi, khona-ke ungavula impikiswano, khona-ke inani lemali kwi-akhawunti yomhloli wezimbali lizomiswa ngesikhathi sokuqhubeka kwezinqubo. Ngokwenqubomgomo yesevisi yethu, iklayenti lingavumelana nesazi sezimbali ukuthi sishintshe isixha noma sibuyisele inani ngokugcwele. Abakwa-Florists banelungelo lokukunikeza isephulelo kuma-oda alandelayo. Impikiswano ingavulwa kungakapheli izinsuku ezintathu ngemuva kokulethwa kwezimbali. Uma ngaphambilini ubhale ukubuyekeza okuhle kwe-oda esitolo noma kumuntu othile wezimbali, impikiswano ngeke ivuleke.
Ungachofoza inkinobho "Angikwazi ukudlulela esitolo". Kulokhu, umhloli wezimbali uzothola isaziso ozame ukusishayela ucingo, futhi isilinganiso sesitolo sizokwehliswa ngokuzenzekelayo. Ngokulandelayo, sizoxhumana nesitolo, futhi abasebenzi baso bazokushayela futhi.
Imvamisa abamukeli bathintwa ngaphambi kokulethwa kwangempela. Isithunywa sizovuma ngesikhathi esikahle sokuletha izimbali ezintsha ekhelini. Uma ufake i-oda losuku oluthile, umamukeli uzothintwa ngosuku lokulethwa, imvamisa ekuseni. Ku-akhawunti yakho yangasese, ungathola isikhathi sokulethwa kwe-oda lakho, lizoshintshwa libe yisikhathi esikahle somamukeli.
Kwimbali ngayinye, isikhathi esincane sokubhaliswa kwayo kanye nokulethwa kwayo kunqunywa, kukhonjiswa eduze kwesimbali ngasinye. Unethuba lokufaka i-oda kusengaphambili nangosuku lokulethwa.
Isevisi yethu isebenza ngokubambisana nezinhlangano ezisemthethweni futhi yenza njalo ama-oda ezinkampani, kulokhu sisizwa uhlelo oluzenzakalelayo. Ukuhlanganiswa okukhulu kwezimbali kukuvumela ukuthi ukhethe izimbali zezimbali nganoma yisiphi isenzakalo. Lapho ufaka i-oda, kufanele ukhombise imininingwane yebhizinisi elisemthethweni. I-invoyisi izothunyelwa ngokuzenzakalela kumeyili yakho.
Lapho ufaka i-oda lokuqala enkonzweni yethu njengenhlangano esemthethweni, uzothunyelwa ngokuzenzakalelayo incwadi enesivumelwano ne-invoyisi. Kufanele ugcwalise, usayine futhi uthumele isivumelwano ositholile ngamakhophi amabili eposini lethu. Ngemuva kwalokho sizothumela enye yazo kuwe.
Uma unesifiso sokubona inkontileka ngaphambi kokufaka i-oda, xhumana nathi: @
Umthengi ubhalisa kusayithi ngokuzenzekelayo ngemuva kokufaka i-oda lakhe lokuqala. Inombolo yeselula oyicacisile kulwazi lwe-oda izoba ukungena kwakho ngemvume ngokuzayo. Ikhodi yokufaka i-akhawunti yakho izothunyelwa kuwe ngomyalezo.
Uma u-oda izimbali ngocezu ngalunye, kufanele ukhethe okungenani izingcezu eziyi-7. Sikukwazisa ukuthi uye esigabeni se- "Super Offer", singatholakala ekhasini eliyinhloko lesayithi. Nakhu okunikezwayo okuvela ezitolo ezithengisa izinto eziningi nezitolo ezinamathegi entengo amahle.
Yebo ungakwenza. Uma ufuna ukushintsha okuthile esixukwini esikhethiwe, vele ushiye izifiso zakho kulwazi olwengeziwe ngesikhathi senqubo yoku-oda. Abathengisi bethu bezimbali bazokushayela ukuthi nixoxe ngezindlela ezingakhetha zokufaka esikhundleni.
Eduze kwesithombe esinezimbali kukhona ukuhlaziywa okuphelele kokwakheka kwaso. Ungaphinda uchofoze kunoma yiliphi igama lembali, lizoqokonyiswa ngombala esithombeni.
Usayizi wesimbali uyakhonjiswa eduze kwesithombe ngasinye. Zikhonjiswa isazi sezimbali esingumbhali wokuhlelwa kwembali.
Nakhu okunikezwayo okuvela ezitolo ezidayisa yonke impahla kanye nezentengiso ngamanani entengo ezimbali. Ngaphezu kwalokho, ungazinqumela mathupha ngenani lezimbali, uhlobo, ubude besiqu nombala.
Ukuthola izimbali ezinezimbali ozidingayo, bheka usizo lwezihlungi.
Yebo kunjalo. Abakwa-Florists bathumela izithombe zezimbali eseziqoqiwe phambilini, ngakho-ke kuzoba lula ngabo ukuthi bakhiqize ukwakheka okufanayo.
Yebo, ngokuya ekhasini lomkhiqizo, unganyusa isixha ngo-30% noma ngama-60% Okusho ukuthi, intengo yesimbali izobe iphakeme ngale ngxenye yemali yoqobo, futhi izimbali ezifakwe esixukwini zizofakwa ekwakhiweni. Uma ukhetha isixha sohlobo olulodwa lwezimbali, khona-ke ungakhuphula inani lazo nganoma iyiphi inombolo.
Zonke izinketho zezimbali zethulwa kusayithi. Sincoma ukusebenzisa izihlungi ezilungele ukusesha kwakho. Kepha ikakhulukazi sisebenza nabasebenza ngezimbali abasebenza ngezimbali ezisikiwe.
Khombisa izifiso zakho nemibandela yokugcwaliseka kwe-oda kulwazi olwengeziwe. Uma zitholakala, isazi sezimbali nakanjani sizokushayela izingxoxo.
Abasebenza ngezimbali abasebenzisana nensizakalo yeFloristum.ru bayawazi umthetho wethu: “Izimbali ezintsha kuphela! Awuvumi? IFloristum.ru akuyona eyakho. " Ngakho-ke, ungaqiniseka ukuthi kuphela izimbali ezintsha ezifakiwe ekwakhiweni. Ekulethweni kwezimbali, umamukeli uhlaziya ukuvuselelwa kwezimbali. Ngemuva kwakho konke, kumuntu ngamunye wezimbali onentshisekelo kukho, ungathola izibuyekezo kuwebhusayithi yethu.
Yebo, inkokhelo yenziwa ekhasini elihlukile, futhi idatha yamakhasimende ayigcinwa. Sisebenza kuphela ngezinhlelo ezaziwayo nezithembekile.
Yebo kunjalo. Lapho ufaka i-oda, ufaka imali kuqala ku-akhawunti yesevisi yethu, lapho igcinwa khona kuze kube yilapho i-oda seliphothuliwe nezinye izinsuku ezintathu ngemuva kwalokho. Isinyathelo esinjalo sithathwa ukuze iklayenti libe nemibuzo mayelana ne-oda. Ngalesi sikhathi, unethuba lokuvula impikiswano, lapho-ke imali ngeke ifakwe kwi-akhawunti yezimbali kuze kube zonke izinkinga zixazululwa.
Uma i-oda selivele lithathiwe ngomsebenzi, kuzofanela ulinde kusuka ezinsukwini ezi-1 kuye kwezingu-14 zokusebenza.
Uma usadumele nge-oda lakho, qiniseka ukuthi ubhala isibuyekezo. Uma inegethivu, lapho-ke ungavula impikiswano nesazi sezimbali. Ngesikhathi sokucaciswa kwazo zonke izimo, imali ekwi-akhawunti yezimbali izovinjelwa. Ungavumelana nesazi sezimbali ukuthi sishintshe isixha noma sibuyise inani eligcwele lemali. Abathengisi bezimbali bethu bayawazisa amaklayenti abo, ngakho-ke bavame ukubanikeza izaphulelo kuma-oda alandelayo. Ingxabano ingaqalwa zingakapheli izinsuku ezintathu kusukela ngosuku lokulethwa kwezimbali. Uma ngaphambilini ushiye ukubuyekeza okuhle ku-oda, ukuvula ingxabano akunakwenzeka.
Ngemuva kokuthi izimbali sezithunyelwe, kuzothunyelwa umyalezo enombolweni yakho yocingo, ekuphenduleni lapho ungabhala khona okuvelayo ngokusebenza nomthengisi wezimbali noku-oda uqobo. Esizeni, ngokufaka i-akhawunti yakho yangasese, ungabhala isibuyekezo.
Isitolo ngasinye sinezibuyekezo eziningi, phakathi kwazo kukhona izimpendulo ezinhle nezimbi. Eceleni komunye nomunye wabo, kukhonjiswa ukuthi ngubani obhale ukubuyekeza: ikhasimende noma umamukeli. Isibuyekezo singahlelwa kuphela umuntu osibhale ngaphambilini.
Sinikeza ikhadi leposi lamahhala lesimbali ngasinye. Yikhasimende kuphela okufanele libhale umbhalo wokuhalalisela. Isazi sezimbali sizokhetha ikhadi elifana nezimbali zakho nombhalo wakho.
Lapho ufaka i-oda, uzokwethulelwa inani lemikhiqizo eyengeziwe. Uma ungakutholi okudingayo lapha, bese uthinta abasebenzi, nakanjani bazokusiza.
Isazi sezimbali sikhetha ikhadi lokubingelela ngokususelwa embhalweni owubhalile. Kepha uma unezifiso ezithile, khona-ke usazise ngazo kulwazi olwengeziwe lapho ufaka i-oda.
Lapho ufaka i-oda, faka uphawu phambi kwamazwi athi "Thatha isithombe ngezimbali". Uma obhaliswayo evuma, uzosithola isithombe ku-akhawunti yakho noma nge-imeyili.
Isicelo seselula "Izimbali zeFloristum.ru" sizotholakalela ukulanda ku-AppStore noma ku-PlayMarket.
Isevisi yethu isebenzisa ama-florists avela emadolobheni ahlukene. Lapho ufaka i-oda, i-florist isebenza naye, owashicilela isipho edolobheni olithandayo. Idolobha ngalinye linezimbali ezahlukahlukene, ngakho-ke okunezinhlobonhlobo nakho kuyahluka.
Kukhona ama-florist amaningi emadolobheni amakhulu, ngakho-ke aheha amakhasimende hhayi ngemikhiqizo ehlukahlukene kuphela, kepha nangamanani aphansi.